FIRXAD! – Cabdicasiis Guudcadde
Dal la dhiso waxa ka horreeya dad dhisma, dad dhismana qof isdhisa.
Diin iyo Feker
May 14, 2016 November 6, 2016 Guudcadde
Qarni ka Dib iyo Qalaalasaha Bariga Dhexe
Bisha May 15, 2016, waxa ku beegan qarni buure ah ka dib markii la gaadhay is-afgaradkii burburiyay is-afgaradka. Waa heshiiskii Sykes-Picot. Waa 1916. Waa heshiiskii lagu mijo-xaabiyay dawladdii Cusmaaniyiinta. Haddii Afrika lagu qaybsaday heshiiskii Berliin, 1884, dalalka Carbeedna waxa lagu kala goostay heshiiskaa Sykes-Picot. Dawladaha Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka ayaa isu kaashaday sidii heshiiskaasi u fuli lahaa. Dabcan caado-qaatayaal Carbeedna waa ay ku kaalmeeyeen. Muslimiintu waxa ay la kulmeen jab aad u qadhaadh oo dantu tidhi “oggolaada” heshiiskaa dabadii.
Waxa lagu doodi karaa in dhacdadani ahayd tii u laxaadka weynayd ee dareensiisay Muslimiinta in sarrayntu xagga kale jirto, oo dunida rag kula nool yihiin. Waxa ay labaysaa soo-geliddii uu Napoleon Banoparte soo galay Masar bilawga qarnigii 19-aad. Laakiin heshiiskani hilfaha ayaa uu u qaaday.
Maxaa dhacay heshiiskaa ka dib?
Muslimiintu, waa run oo, waxa ay noqdeen col jabay. Dabadeedna waxa uu cajalkii kaga dhegay, “Beri ayaa aannu buuraha jiidhi jirnay,” “Rooma iyo Faaris annaga ayaa furannay,” “Hebel, Hebel, Heblaayo iyo Heblaayo ayaa naga dhashay…,” iyo weedho “naflacaaridnimo” ka muuqato. Arrinta ugu sii yaabka lehi waa in maanta Muslimiintu geedkii iniintiisu bislaataba ay sheegtaan in iyaga laga soo dheegtay. Ileen waa firxad e, halkaas ayaa ay farxad ka eegayaan! Firxadkuna waa ciidanka laga adkaaday hadhaaga ka soo hadhay ee kaarihii meel lagu gubayba, sheegta. “Annaga ayaa sii jiidhnay!” Tabtaas miyaa la innaga gartaa!
Waa sababta aad u arkaysid Muslimiin badan oo arrintii aqoonyahanno sayniseed ama kuwo taariikheed ogaadaanba, kaga falceliya, “Waxan 15 qarni ka hor ayaa na loo sii sheegay!” Waxa ay Muslimiintii noqotay maqal-haye aan xisaabta garanayn!
Waxa la wada ogsoon yahay in dunida loo samaystay qaab-nidaamsan cusub (New World Order). Qaab-nidaamsankaasi waa ka soo saaray degelsiyaasadeedkan “Bariga Dhexe” loo bixiyay. Galaangal iyo farafarayn baaxad leh ayuu Galbeedku ku yeeshay gobolkaa. Carabta oo awelba xin hoose u qabtay Turkida Cusmaaniyiinta u badnayd, ayaa la maalgashaday, oo waa tii la siraaday qawmidaysankaa, ee la yidhi, “Ma idinka oo ashraaftii ah ayaa Turki idin maamuli!?!” “Maya” inta ay yidhaahdeen, waa kuwii ku kacay! Wixii dhacay baa ka dhacay!
Dhibta dhulalkaa “Bariga Dhexe” waxa ay ka bilaabantaa kuna dhammaataa, abqaalka Israa’iil. Waa xaqiiqo. Sida oo kale arrinta Falastiin ee mandiqaddaasi waa ammuur qawmiyad Carbeed u taalla, ee ma aha arrin Muslimka ka dhaxaysa. Tanina waa xaqiiqo kale, oo malaha tii hore ka yara qadhaadh. Xalku waxa uu ku jiraa in qaab Carbeed loo galo, ee ma aha in la diimeeyo danaha Yuhuud-Carbeedka ah, oo “jihaad” loo eekaysiiyo.
Maanta waxa jira dedaalka samaynta wax la dhaho “Bariga Dhexe ee Weyn – The Greater Middle East.” Ma aha wax sahlan. Waa qorshe qarniyo qaatay. Haddii markii hore Israa’iil cadawga Carabta looga dhigay, maanta siyaasaddan cusubi waxa ay beegsanaysaa in Shiicada iyo Sunniga cadaw la isaga dhigo. Dabcanna wax baa ka fulay.
Qarni ka dib, dad badan ayaa rumaysan in heshiiskii Sykes-Picot uu fool kale yeeshay. Waa weji kale oo cusub. Qolo ayaa tidhaahda “Sykes-Picot2” weeye, qaar kalana waxa ay ku doodaan in “Kerry-Lavrov” uu yahay. John Kerry, Xoghayaha Debedda ee Maraykanka, iyo Sergie Lavrov, dhiggiisa Ruushku in ay hoos ka xidhiidhsan yihiin ayaa ay u badan tahay. Si kale u dhig, Faransiiskii iyo Ingiriiskii qarni ka hor ka adeegey degelka, haddeer waxa beddelay Maraykan iyo Ruush. Oo saw tii la ogaa in ay galeen labadan dali heshiis u suurad ekaa kii habardugaag, oo ay dhaheen “diyaarradaha inoo kala ilaaliya.” Waa markii Suuriya lagu dul loollamayay. Waa ay iska caddahay waxa meesha ka socdaa in dhagari aanay ka maqnayn.
Gunaanadkii, inta Carabtu isku deyayso in ay khasaaraha dad kale kula galgalato, Muslimiinta kalana qiirada iyo jibbada isla qaadayaan e, “Jihaad yaa Mu’miniin,” iyo “Quddus baan ku soo tukanaynaa,” isku maaweelinayaan, xalku waa uu dheer yahay, xarkuna waa dhaw yahay!
Nagula wadaag Baraha Bulshada siad:
Previous Doodda Shiicada iyo Sunniga: Diin god goray gal, gorayna god diin gal!
Next Maalmahaygii Muqdisho
mohamed qasin says:
aad ayad u mahad santahy wan ka faideystay thanks
Ka Raadi halkan
Xukuumadaha Maxaa loogu Guulwadeeyaa?
Shaacsanaha Rushaynta: Sidee u Fahmaynaa Xanuunnada Nafsiga ah?
Gooninnimadii Guevara: Warqaaddii uu Halgamaagu ku Macasalaameeyay Jaallihii
“Aqoonyahanka” Kirada ah!
Kaydka Select Month June 2018 (1) May 2018 (2) March 2018 (1) February 2018 (3) January 2018 (4) December 2017 (1) October 2017 (6) September 2017 (2) August 2017 (1) June 2017 (1) May 2017 (1) February 2017 (3) January 2017 (1) October 2016 (4) September 2016 (7) August 2016 (1) July 2016 (5) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (1) March 2016 (2) February 2016 (2) January 2016 (1) December 2015 (3) November 2015 (1) October 2015 (4) August 2015 (1) July 2015 (2) May 2015 (3) April 2015 (1)